Trump oo ku hanjabay inuu xirayo xadka Mexico muhaajiriinta qulqulaya awgood - BBC News Somali
Image caption Gawaari safaf dhaadheer ugu jira xadka Mareykanka iyo Mexico
Madaxweynaha Maraykan Donald Trump ayaa sheegay inay u badan tahay inuu xiri doono xuduudda Maraykanku la leedahay Mexico toddobaadka soo socda.
Tallaabadan ayay suuragal tahay inay carqaladeyso balaayiin doolar oo ganacsi oo ka gudba xuduudda dalkaasi.
Wuxuu uga digay madaxweyne Trump dalka Mexico inaysan ku filneyn in ay joojiso soogalootiga imaanaya Maraykanka.
Image caption Trump ayaa kula hadlay warfidiyeenada Jimcihii kula halday Florida
Madaxweyne Trump ayaa Jimcihii u sheegay warfidiyeenada in "ay u badan tahay in la xiri doono xadka toddobaadka soo socda, taasina uu ku qanacsan yahay."
Waxuu sidoo kale sheegay in Mexico ay u fududahay"inay ka joojiso muhaajiriinta inay soo galaan Mareykanka, blasé aysan taasi dooneynin".
Sidee tallaabadan Mexico uga jawaabtay?
Madaxwaynaha Mexico López Obrador ayaa sheegay in aanu la noqon doonin mid dhaqanka iskahorimaadka ah ee Washington ay waddo.
López Obrador waxuu sidoo kale sheegay Khamiistiiin arrinta magangalya doonka "aysan ahyan howl u taalo dadka".
Wuxuu ku tilmaamay inay tahay arrin ay joojin karaan dalalka Laatiin Ameerika ku yaalo balse aysan Mexico waxba ka qaban Karin.
Image caption Madaxweynaha Mexico López Obrador
"Dadka Mexico kama doontaan shaqo Mareykanka. Inta badan dadka magangalya doonka ah waa kuwa kasoo jeedo dalalka kale ee Laatiin America, " ayuu yiri madaxweynaha Mexico.
Kadib markii madaxweyne Trump uu bartiisa twiterka Jimcihii kusoo qoray, ayaa madaxweyne López Obrador wuxuu ku yiri taageerayaal badan oo isku soo baxay "Waxaan doonayaa inaa cadeeyo inaynaan dooneyn inaa la dagaalano xukuumadda Mareykanka. Waxaan dooneyna Nabad iyo Jeceyl."
Muxuu u doonayaa madaxweyne Trump xiritaanka xadka Mexico?
Image caption Muhaajiriin
'' Haddii xaaladda muhaajiriinta ay gaarto heer ay wax ka qaban weyno, ama ay dadku dhibaato soo gaareyso, waxaan xiri doonaa halka laga soo galo dalka in muddo ah, ilaa iyo inta ay xaaladda ka hagaageyso'' waxaa sidaasi yiri madaxweyne Trump.
Maxay tahay saameynta ay yeelan karto?